Guddoomiyaha Saddexda Gole ee Ahlu Sunna Waljamaaca oo lagu soo dhaweeyay Cadaado “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Saddexda Gole ee Ahlu Sunna Waljamaaca oo lagu soo dhaweeyay Cadaado “SAWIRRO”
Mas’uuliyiin uu hogaaminayo Guddoomiyaha Saddexda Gole ee Ahlu Sunna Waljamaaca ahna Musharax u taagan qabashada xilka Madaxtinimada gobollada Mudug iyo Galgaduud oo gaaray Degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegay in uu wax ka qaban doono xagga horumarinta adeegyada bulshada.
Wafdigan yaa waxaa soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka, iyadoo munaasabad soo dhawayn ah loogu sameeyay xarunta madaxtooyada Ximan iyo Xeeb, halkaas oo marti sharaf kala duwan ay ka hadleen.
Guddoomiyaha degmada Cadaado C/laahi C/raxmaan Tootoole oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in ka degmo ahaan ay wadaan abaabul badan oo Cadaado ay isugu diyaarinayso qaabilaadda wufuudda kala duwan ee imaanaysa.
Sheekh Ibraahim Xasan Guureeye Guddoomiyaha saddexda gole ee Ahlu-Sunna Waljamaaca ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada Mudug iyo Galgaduud, oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in xilligan ay bulshada gobolada dhexe hortaal fursad muhiim ah oo ay tahay in laga faa’iideysto.
Waxaa kale uu sheegay in uu ka mid yahay musharixiinta u tartamaya xilka madaxwaynaha maamulka la samaynayo.
Ugu dambayn madaxwayne ku-xigeenka Ximan iyo Xeeb Cabdi Maxamed Suldaan Axmed-nuur oo munaasabadda soo xiray ayaa sheegay inay wafdi u dirayaan magaalada Dhuusamareen si ay kaga qayb qaataan dib-u-heshiisiinta halkaas ka socota, iyo ka qeyb qaadashada nabadeynta shaqaaqadii dhawaan ka dhacday Degmada Guriceel.
Sawir Qaade:- Maxamuud Cabdi Diirshe
Kooxda Liverpool oo u soo baxday quarter finalka koobka FA Cup-ka “SAWIRRO”
Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka oo ku baaqay in lahelo shilin Soomaali